CIRGN Antananarivo : Noraisin’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa ny fibaikoana -
AccueilSongandinaCIRGN Antananarivo : Noraisin’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa ny fibaikoana
CIRGN Antananarivo : Noraisin’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa ny fibaikoana
Nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo ny fanoloana ny fibaikoana ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto Antananarivo (CIRGN). Araka izany, ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, indray no mitondra ny fibaikoana sy fitantanana ny CIRGN raha ny jeneraly Rakotomahanina Florens no nitondra izany teo aloha.
Tontosa omaly, teny amin’ny tobin’ny CIRGN Ankadilalana, ny lanonana fifamindram-pahefana sy andraikitra teo amin’ny jeneraly teo aloha, Rakotomahanina Florens, sy ny jeneraly vaovao, Andrianjanaka Njatoarisoa, izay natrehin’ireo manamboninahitra ambony sy manamboninahitra lefitra teo anivon’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto Antananarivo. Tamin’izany ihany koa no namindrana ny « écusson » manamarika ny CIRGN Antananarivo tamin’ity jeneraly vaovao hitondra ny fibaikoana eo anivon’ny CIRGN ity.
Taorian’ny lanonam-pamindram-pahefana sy andraikitra kosa nirary soa sy nitsodrano ny kaomandin’ny CIRGN vaovao ny jeneraly Rakotomahanina Florens. Teo ihany koa ny nanafatrafaran’ity farany ireo manamboninahitra ambony sy manamboninahitra lefitra amin’ny fanatontosana an-tsakany sy an-davany ny asa rehetra hiandraiketan’izy ireo eo anivon’ny CIRGN Antananarivo, sns.
Tetsy andaniny nanao antso avo tamin’ireo zandary manamboninahitra ambony sy lefitra ihany koa ny kaomandin’ny CIRGN Antananarivo vaovao amin’ny fifanomezan-tanana eo anivon’ny zandary amin’ny fanantanterahana ny adidy sy andraikitra hiantsorohana amin’ny fanompoana firenena sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fitandroana hatrany ny filaminana.
Teratany karana, mpambongady amina “quincaillerie” ao Tanamakoa no nalaina dimy lahy misaron-tava sy nitondra basy kalaky an-keriny omaly tokony ho tamin’ny 06 ora hariva. Tao amin’ny fokontany Ampasimazava, kaominina ambanivohitr’i Toamasina I no nitrangan’izany. Araka ...Tohiny